2 Bed Detached Bungalow Ukurenta eGloucester, Gloucestershire
Real Estate Listings: » Residential homes » Bungalows » GB » Gloucestershire » Gloucester » 2 Bed Detached Bungalow Ukurenta eGloucester, Gloucestershire1
United Kingdom, Gloucestershire, Gloucester, Gl2 8jt
Ikhowudi yeposi: Gl2 8jt
Iimbonakalo: Detached Bungalow, 2 Double Bedrooms, Lounge/Diner, Modern Kitchen, Double Garage, Excellent Parking, Large Garden, *Agricultural Restriction*
* nb isithintelo kwezolimo kubaqeshi * lithuba elihle lokurenta i-bungalow esemaphandleni eguqulwe ngokupheleleyo. Amagumbi amabini okulala amabini, igumbi lokuphumla elikhulu elinezinto zokutshisa iinkuni, indawo yokutyela kunye nekhitshi langoku. Ngaphandle kukho igaraji ephindwe kabini, indawo yokupaka ininzi, indawo yokuphumla kunye negadi enkulu yabucala enkulu ejikelezwe ziheedgerows. Izilwanyana zasekhaya zinokuqwalaselwa. Akukho bantu batshayayo. Amandla oMbane-i-40 / EAvaNowAccortsAkazokhenketho ineendawo ezimbini zokulala ezimbini, indawo yokuphumla enkulu enezixhobo zokutshisa iinkuni, indawo yokutyela nekhitshi langoku. Ngaphandle kukho igaraji ephindwe kabini, indawo yokupaka ininzi, indawo ethe tyaba kunye igadi enkulu yabucala ejikelezwe zii hedgerows.Price £ 695pcm kubandakanywa namanzi I-Bhendi yeRhafu iBand B - Ihlathi leBhunga lesiThili seDean * Uthintelo lwezoLimo. .Isixa se-R4040 / ii-EPets ziqwalaselwe kodwa akukho bantu batshayayo .Iza kubiza malini? Ukususela nge-1 kaJuni ka-2019, ngenxa yomThetho weNtlawulo yeNtlawulo yabaqeshi, abaqashi kuya kufuneka bahlawule umrhumo omncinci wokumisela kunye nokuqukumbela isivumelwano sokuqesha kunye Inani eliqingqiweyo leendleko ngexesha lokuqeshisa.Ukuba uthanda ipropathi kwaye unqwenela ukuqhubeka nayo, kuya kufuneka uhlawule idipozithi efikelela kwi-1 irente yerente (ngokubanzi yi-100 yeedola) ukugcina indawo xa ugcwalisa oko kuyimfuneko. iphepha lesicelo kunye nokubonelela nged kunye nolwazi olongezelelekileyo.Ukuba awuphumelelanga nesicelo sakho ngenxa yokuba unikezela ngolwazi oluchanekileyo njengengeniso okanye ukusilela ekuvezeni imiba kwimbali yakho yamatyala y kwaye emva koko ingenakukwazi ukuya phambili ngokuqeshela ngaphakathi kwiintsuku ezili-14, le diphozithi iya kubanjwa. Ukuba umnini-ndawo urhoxisa ipropathi ngenxa yaso nasiphi na isizathu ngaphandle kokungafaneleki kwakho, idiphozithi yokubambisa iya kubuyiselwa kuwe. Faka isicelo ngexesha lokuhlala njengokuphulukana nezitshixo, utshintsho kwisivumelwano, ukuhlawula ityala lasemva kwexesha, kunye nokuphela kwangaphambi kokuba ngumnini. Oku kuyakuchazwa ngaphambi kokutyikitya isivumelwano sokuqeshisa.Izimali kuphela ngaphandle kwedipozithi ziya kuqeshiswa (inyanga eyi-1 ngaphambi kwexesha) kunye nedipozithi yokhuseleko (elilingana neeveki ezi-5 zokurenta) .Ngokuqinisekisa kwakho kwakhona, uSteve Gooch Lettings kufuneka abe nomthengi ukukhuselwa kwemali ngoMkhuseli weMali wabaThengi kunye nazo zonke iidipozithi zokhuseleko zifakwe kwiNkonzo yokuKhusela iDiposithi. Ukujonga ukujonga le fowuni *** DirectionsFrom Gloucester entloko ukuya eWestbury-On-Severn kwiA48. Khwela eM Minsterworth kwaye ujike ujonge kuLey Road (ngaphambi nje kwecandelo leegaraji zorhwebo kunye neMinsterworth Water Ski Club). Emva kwethutyana iibheringi ziye kwiLower Ley Lane (Ngaphandle kwendlela) kwaye ipropathi ifunyenwe kwicala lasekhohlo emva kwepama
, Gl2 8jt
995 Pound £ / Ngenyanga
&nbspGloucester in Gloucestershire, Gl3 2ab
1,450 Pound £ / Ngenyanga
&nbspGloucester in Gloucestershire, Gl3 2ep
795 Pound £ / Ngenyanga
&nbspGloucester in Gloucestershire, Gl2 8hy
Izikolo ezikufutshane Gl2 8jt